प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीबाट रिपोर्टर्स क्लब नेपालले घोषणा गरेको पुरस्कारहरू प्रदान, मदन भण्डारी स्मृति पत्रकारिता पुरस्कार गोपाल गुरागाईँलाई « रिपोर्टर्स नेपाल
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीबाट रिपोर्टर्स क्लब नेपालले घोषणा गरेको पुरस्कारहरू प्रदान, मदन भण्डारी स्मृति पत्रकारिता पुरस्कार गोपाल गुरागाईँलाई
प्रकाशित मिति : 2021 April 1, 6:22 pm
काठमाडौं, १७ चैत्र । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले रिपोर्टर्स क्लब नेपालले यो वर्ष घोषणा गरेको पुरस्कारहरु प्रदान गरेका छन् । आज रिपोर्टर्स क्लब नेपालको २३ औं वार्षिकोत्सवमा आयोजित विशेष कार्यक्रमबीच पुरस्कार प्रदान गरेका हुन् ।
यसवर्षको मदन भण्डारी स्मृति पत्रकारिता पुरस्कार वरिष्ठ पत्रकार तथा उज्यालो मल्टिमिडिया प्रालीका कार्यकारी अध्यक्ष÷सञ्चालक गोपाल गुरागाईँलाई प्रदान गरिएको छ ।
यसैगरी, यो वर्षको कुलप्रसाद–चेतकुमारी धमला स्मृति पत्रकारिता पुरस्कार राजधानी दैनिकका सम्पादक सागर पण्डितलाई प्रदान गरिएको छ । पण्डित विगत साँढे दुई दशकदेखि पत्रकारितामा सक्रिय छन् । यो पुरस्कारको राशी ४० हजार रुपैयाँ रहेको छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले यो वर्षको तारिणीप्रसाद कोइराला स्मृति पत्रकारिता पुरस्कार रेडियो नेपालका समाचार महाशाखा प्रमुख डा. नवराज लम्साल र नेपाल टेलिभिजनका प्रमुख समाचार सम्पादक शालिक सुवेदीलाई संयुक्त रुपमा प्रदान गरेका छन् । यो पुरस्कारको राशि ५० हजार रहेको छ ।
यसैगरि कृष्णसेन ईच्छुक स्मृति पत्रकारिता पुरस्कार ताजा खबर साप्ताहिकका सम्पादक ईश्वरी वाग्लेलाई प्रदान गरिएको छ । यो पुरस्कारको राशि २५ हजार रुपैयाँ छ । वाग्ले ३५ वर्षदेखि पत्रकारितामा सक्रिय छन् ।
त्यस्तै, यो वर्षको सहिद जगदजंगप्रकाश शाह स्मृति पत्रकारिता पुरस्कार नागरिक दैनिकका राजनीतिक व्युरो–चिफ बालकृष्ण अधिकारीलाई प्रदान गरिएको छ । अधिकारी विगत डेढ दशकदेखि पत्रकारितामा सक्रिय छन् । अधिकारीलाई दिइएको पुरस्कारको राशि २५ हजार रहेको छ ।
यसैगरी, यो वर्षको उमा सिंह स्मृति पत्रकारिता पुरस्कार कान्तिपुर दैनिककी वरिष्ठ उप–सम्पादक बिनु सुवेदीलाई प्रदान गरिएको छ । सुवेदी विगत डेढ दशकदेखि पत्रकारितामा सक्रिय छिन् । सुवेदीलाई दिईने पुरस्कारको राशी २५ हजार रुपैयाँ रहेको छ ।
यसैगरी यस वर्षको बाबुछिरी फोटो पत्रकारिता पुरस्कार रिपोर्टर्स नेपाल डटकमकका फोटो पत्रकार मुकुन्द कालिकोटेलाई प्रदान गरिएको छ । कालिकोटे विगत दुई दशकदेखि पत्रकारितामा सक्रिय छन् । उनलाई दिइएको यो पुरस्कारको राशी २५ हजार रुपैयाँ रहेको छ ।
त्यस्तै, यो वर्षको वीरेन्द्र शाह स्मृति पत्रकारिता पुरस्कार एबिसी टेलिभिजनका उप–सम्पादक अनन्त अनुरागलाई प्रदान गरिएको छ । अनुरागलाई प्रदान गरिएको उक्त पुरस्कारको राशि २० हजार रुपैयाँ रहेको छ । अनुराग विगत डेढ दशक भन्दा बढि समयदेखि पत्रकारितामा सक्रिय छन् ।
यस्तै, यो वर्षको उत्कृष्ट युवापत्रकारिता पुरस्कार राष्ट्रिय समाचार समितिका उप–सम्पादक जीवन भण्डारी, डिसी नेपाल डटकमका सह–सम्पादक मदन कोइराला, प्राईम टाईम्स टेलिभिजनका उपसम्पादक दिपक अर्याललाई प्रदान गरिएको छ ।
यसैगरी, योहो टेलिभिजनका बरिष्ठ कार्यक्रम प्रस्तोता रोहन श्रेष्ठ, दामन पोष्ट साप्ताहिकका सम्पादक सन्तराम विडारी, नेपाल पुकार टेलिभिजनका सञ्चालक प्रकाशचन्द्र दाहाल, न्यूज एजेन्सी नेपालका क्यामेरा पर्सन देवआनन्द शिल्पकार, सरोकार टेलिभजन तथा हिमालय टेलिभ्वाईसका क्यामेरा म्यान दुर्लभ थापा मगरलाई प्रधानमन्त्री ओलीले उत्कृष्ट युवा पत्रकारिता पुरस्कारबाट सम्मान गरेका छन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीले डेमेक्रेसी खवर साप्ताहिकका सम्पादक गणेश खड्का, न्यूज फिल्मी डटकमका कार्यक्रम प्रस्तोता अनुप भट्टराई, रमाईलो छ का प्रवन्ध निर्देशक उत्सव रसाईली, क्यानडा नेपाल डटकमका सम्पादक रौनक निरौला र प्राईम टाईम टेलिभिजनका पर्सा संवाददाता श्रीकान्त गुप्तालाई प्रधानमन्त्री ओलीले युवा पत्रकारिता पुरस्कारबाट सम्मान गरेका छन् ।
यसैगरी, रिपोर्टर्स क्लब नेपालको प्रदेश शाखामा रहेर उत्कृष्ट भूमिका निर्वाह गर्ने क्लबका लुम्बनी प्रदेश संयोजक रामकुमार क्षेत्रीलाई सम्मान गरिएको छ ।
समाजको विभिन्न क्षेत्रमा विशिष्ट योगदान गर्नेहरु वरिष्ठ पत्रकार श्रीमाधव शर्मा, नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका उपाध्यक्ष दीपक मलहोत्रा, बरिष्ठ सञ्चारकर्मी निर्जल श्रेष्ठ, बराह गु्रपका अध्यक्ष शिवकुमार लामिछाने, शिक्षासेवी मनास्लु वल्र्ड कलेजका अध्यक्ष गेन्द्र लामा, नेपाल हेवी इक्विपमेन्ट व्यवसायी महासंघ संस्थापक अध्यक्ष ताराबहादुर कुँवर, समाजसेवी ढाकाराम बि. एम, बरिष्ठ फिटनेस ट्रेनर प्रकाश केसीलाई प्रधानमन्त्री ओलीले विशेष सम्मान प्रदान गरेका छन् ।